Tratry ny tsingerintaona nahaterahako! | Martech Zone
Tratry ny tsingerintaona nahaterahako!
Alarobia, Aprily 19, 2006 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Douglas Karr
ExactTarget dia toerana tsara hiasa!
Androany maraina dia gaga ahy ireo mpiara-miasa / mpiara-miasa / mpiara-miasa amiko nisakafo atoandro. Fenoy miaraka amin'ny confetti fitsingerenan'ny andro nahaterahana (mitandrema mba tsy hahazo ao amin'ny fitendry), pitaovan'ny tsingerintaona nahaterahana, masinina Expresso (!!!), penina Dr. Grip Gel Fine Point, Marka fanosotra maina Expo miaraka amina bracket sy famafana amin'ny tendrony, AND Remover "Tide To Go" (satria miverina avy misakafo atoandro foana aho miaraka amina zavatra mitete tokana amin'ny akanjoko).
Tsy afaka manana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara lavitra noho izany ianao! (Mandra-pahatongako any an-trano ary ny zanako mamahana ahy ny mofoko miaraka amin'ny labozia 'Over the Hill'!). Geez, mbola tsy 40 akory aho!
Tags: fitsingerenan'ny andro nahaterahanadouglas karrprectargetbirao